किन कसैको दाँत अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ ? कसरी गर्ने उपचार ? – Health Post Nepal
किन कसैको दाँत अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ ? कसरी गर्ने उपचार ?
२०७५ फागुन २१ गते १५:०३
के तपाईं एक बाइट आइसक्रिम अथवा एक चम्चा तातो सुप खानासाथ दाँतको दुखाइ महसुस गर्नुहुन्छ ? यदि तातो वा चिसो खानासाथ दाँतमा दुखाइ, असहजता तथा झन्झनाहट पैदा भएको महसुस गर्नुहुन्छ भने यो क्याभिटीका कारण हुन सक्छ, जुन संवेदनशील दाँत हुनेको कमन समस्या हो । दाँतको संवेदनशीलता अर्थात् डेन्टिन हाइपरसेन्सिटिभिटी भनेको चिसो या तातोमा दाँतले दुखाइको प्रतिक्रिया गर्नु हो । यो कसै–कसैमा अस्थायी हुन्छ भने कसै–कसैमा बल्झिरहने हुन्छ । यसले जो–कसैको दाँतलाई असर गर्न सक्छ ।
दाँत संवेदनशील हुनुका विभिन्न कारण हुन्छन् । तर, अधिकांश कमन कारणबाट तपाईं आफ्नो मुखको सरसफाइमा व्यावहारिक परिवर्तन गर्नाले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ ।
दाँत संवेदनशील हुँदाका लक्षण
– तातो खाना या तातो पेयपदार्थ खाँदा झन्झनाहट
– चिसो खाना या चिसो पेयपदार्थ खाँदा झन्झनाहट
– चिसो हावा पर्दा सिरिंङ हुनु
– गुलियो या गुलियो पेय पदार्थ खाादा असहजता
– एसिडिक खाना तथा पेयपदार्थ खाँदा असहजता
– चिसो पानीको प्रयोग गर्दा, नियमित दाँतको सरसफाइ गर्दा, ब्रस तथा कुल्ला गर्दा असहजता, जुन
कसैलाई अलि माइल्ड र कसैलाई अलि कडा हुन सक्छ ।
के कारणले हुन्छ दाँत संवेदनशील ?
कसै–कसैको दाँत प्राकृतिक रूपमै अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । यदि कसैको दाँतमा इनामेल अति पातलो छ भने यस्तो हुन्छ । इनामेल दाँतको बाहिरी पत्र हो, जसले दाँतलाई सुरक्षित राख्छ । अन्य धेरै कारणले दाँतको इनामेल नष्ट हुँदै जाने हुन्छ । जस्तै,
– दाँतलाई अति घोटेर ब्रस गर्नाले
– साह्रो ब्रसले दाँत माँझ्ने गर्नाले
– रातमा दाँत किटकिट गर्ने बानीले
– रातिमा साह्रो खानेकुरा चपाउनाले
– नियमित एसिडिक पेयपदार्थ तथा अमिलो खाद्यान्न खानाले
– कहिले–काहीँ अन्य कारणले पनि हुन सक्छ । जस्तै,
ग्यास्ट्रिक हुँदा पेटबाट अमिलो पानी मुखमा आउँछ । यसले पनि दाँतलाई कमजोर बनाउँछ ।
त्यस्तै, धेरै भमिट गर्ने मानिसमा पनि पेटभित्रको एसिडले दाँतको इनामेल नष्ट गर्छ र दाँतलाई संवेदनशील बनाउँछ ।
दाँत खिइँदै जानु, दाँत भाँचिनु, दाँतमा छिद्र हुनु, अधिक खानु आदिले पनि दाँँतको एक्सपोजर बढी हुन्छ र दाँत संवेदनशील हुन्छ । यदि यी कारण हुन् भने तपाईंले निश्चिय पनि एउटा दाँत मात्रै यस्तो भएको महसुस गर्नुहुनेछ ।
कहिलेकाहीँ तपाईं अस्थायी रूपमा पनि दाँत संवेदनशील भएको अनुभूत गर्न सक्नुहुन्छ । जस्तै, दाँत भर्दा, तार लगाउँदा, दाँत सफा गर्दा आदि । यस्तोमा केही दिनपछि समस्या आफैँ हटेर जान्छ ।
कसरी गर्ने संवेदनशील दाँतको उपचार
– यदि तपाईंको दाँतको संवेदनशीलता माइल्ड छ भने क्रमशः उपचार गर्न सक्नुहुन्छ । संवेदनशील दाँतका लागि बनाइएको छुट्टै पेस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यस्ता पेस्टमा दाँतलाई इरिटेड गर्ने तत्व हुँदैनन् ।
– नरम ब्रस प्रयोग गर्नुहोस् ।
– दाँत माझ्दा बिस्तारै माझ्ने गर्नुहोस् । यसो गर्दा मात्रै पनि करिब एक हप्तामा तपाईंलाई फरक महसुस हुनेछ ।
– विनाकारण दाँत घोट्ने बानी त्याग्नुहोस् ।
– राति सुत्नेवेला चिया, कफी नपिउनुहोस् ।
– माउथगार्ड प्रयोग गर्नुहोस् ।
– सातामा एकदिन फास्टिङ पनि दाँत सुरक्षित राख्ने राम्रो उपाय हो ।
– ब्रस गर्दा दाँतको फोहोर गएन भनेर लुगा आदिले नरगड्नुहोस् । बरु नुन र तोरीको तेल मिलाएर दाँत सफा गर्न सक्नुहुन्छ ।